အခုအချိန် Apple ID မှာ Myanmar Region ကို ချိန်းသင့်လား ? -
အခုအချိန် Apple ID မှာ Myanmar Region ကို ချိန်းသင့်လား ?
ပထမဆုံး ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ Apple ID မှာ Myanmar Region ကို အသိအမှတ်ပြု အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေနပ်မိသလို ဝမ်းလည်းသာပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျှော်လင့်လာခဲ့ရတာပါ။ ကျနော်တို့ သူများလိပ်စာ၊သူများဖုန်းနံပါတ်၊ သူများနိုင်ငံ၊ သူများမြို့တွေနဲ့ အတုလုပ်ပြီး သုံးနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ အခုတော့ ပြီးသွားပါပြီ။ နောင်ဆိုကျနော်တို့ရဲ့ လမ်းအမှန်၊ မြို့အမှန်၊ ဖုန်းနံပါတ်အမှန်၊ နိုင်ငံအမှန်နဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
အရင်ဆုံး Apple ID ထဲမှာ iTunes Gift Card ငွေလက်ကျန် $ မရှိသူများကတော့ Myanmar Region ကို တန်းပြီး ချိန်းနိုင်ပါမယ်။ Apple ID ထဲမှာ $ ကျန်နေတဲ့သူများကတော့ Myanmar Region ကို ချိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချိန်းချင်ရင် အရင်ဆုံးApple ID ထဲက $ ကို လုံးဝ ကုန်အောင်လို့ Apple Support App ကနေပြီး Apple ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများဖြင့် Live Chat လုပ်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ Apple ID ထဲမှာ $ အကျန် မရှိတော့ဘူးဆိုလျှင်တော့ Myanmar Region ကို ချိန်းလို့ ရပါပြီ။ ( Myanmar Region ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား Country Region ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချိန်းတဲ့နည်းကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချိန်းတဲ့နည်း ပို့စ်ကိုလည်း တင်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ )
ဒါဆို အခု ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Apple ID တွေမှာ Myanmar Region ကို ချိန်းဖို့သင့်ပြီလား။ ဒီအမေးအတွက် အဖြေကတော့ အမျိုးမျိုး ရှိပါမယ်။ Myanmar Region ဟာ အခုမှ အသိအမှတ်ပြုခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Apple ၏ App Store ပေါ်ရှိ Applications အကုန်လုံးကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ခြင်း ရှိဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Applications အကုန်လုံးလို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် ဒီအထဲမှာ Games တွေလည်း ပါပါမယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ Applications တွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ Developers တွေက Country အားလုံးကို အသိအမှတ်မပြု၊ မထည့်ထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာရင်တော့ ဒါတွေက အဆင်ပြေသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးရမှာပေါ့။
ဒါကြောင့်လည်း Apple ID မှာ Myanmar Region ကို ချိန်းဖို့ သင့် မသင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်း ဖြစ်လာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်များဟာ ဆန်းသစ်တဲ့ Applications တွေ၊ အခုမှ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Games တွေ၊ Subscription တွေ လစဥ်ပေးပြီး အသုံးပြုရမယ့် App or Games တွေ အစရှိသည်တို့ကို မသုံးလည်းဖြစ်တယ် မဆော့ရလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ ပြောလာရင်တော့ ကျနော်က ခင်များ Myanmar Region ကို ချိန်းလိုက်လည်း ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူးလို့ ပြောမှာပါ။
ဒါမှမဟုတ်လို့ ခင်များကတော့ ဟို App ကို သုံးလို့မရရင် မဖြစ်ဘူး၊ ဒီ App ကိုတော့ လစဥ် Subscriptions ပေးပြီး အသုံးပြုချင်တာ မရလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုလာရင်တော့ Myanmar Region ကို မချိန်းသင့်သေးဘူးလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ အချိန်တစ်ခုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ကျနော်တို့ရဲ့ Myanmar Region ပေါ်မှာလည်း အခြားCountry Region တွေပေါ်ကလိုပဲ Applications တွေ၊ Games တွေကို အကန်အသတ်မဲ့ ရယူလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အခုလောလောဆယ် ကျနော်ကတော့ မသုံးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်နေတဲ့ Apple ID အကောင့်ဟောင်းလေး တစ်ခုကိုပဲ Myanmar Region ချိန်းလိုက်ပြီး App Store ပေါ်မှာ ဂေါ်နေပါတယ်။
Previous လက်ရှိ Apple ID Region မှ Myanmar Region သို့ချိန်းနည်း
Next iOS to Andriod ကို Photos တွေ Videos တွေ ပို့ကြ ယူကြမယ်